သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ဘာလို့ Website ဆိုတာလိုအပ်တာလဲ? | PRO-X Software Solution
သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ဘာလို့ Website ဆိုတာလိုအပ်တာလဲ?
၁။ လုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးအမြတ်ရှိခြင်း။
ယနေ့ခေတ်လူတွေက အရင်ခေတ်ကထက်အင်တာနက်ပိုအသုံးများလာပြီး တစ်ခုခု ကိုယ်သိချင်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်း (သို့) ဝန်ဆောင်မှုတွေကို အင်တာနက်ကနေတဆင့်ရှာဖွေလာကြတယ်။ အကယ်၍ ကိုယ့်လုပ်ငန်းက Website မရှိဘူးဆိုရင် အင်တာနက်ကရှာတဲ့ List ထဲမှာ သင့် Company ရှိမှာမဟုတ်သလို သင့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာ Information မှလည်း ရှာတွေ.မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်နဲ့စီးပွားတူပြီး Website ရှိတဲ့ Company ကိုပဲ အင်တာနက်မှာ စုံစမ်းသူက ရောက်ရှိသွားမှာပါ။
၂။ Website က ပိုက်ဆံအကုန်အကျ သက်သာခြင်း။
Website တစ်ခုအတွက် အသုံးပြုရမည့် ငွေးကြေးသည် သတင်းစာကြော်ငြာ၊ ဂျာနယ်ကြော်ငြာတွေမှာ တစ်ခါကြော်ငြာစာမရှိပါဘူး။
၃။ Customer တစ်ယောက်ချင်းစီကို သတင်းပေး အကြောင်းကြားစရာမလိုအပ်ခြင်း။
အကယ်၍ သင့်မှာ Website ရှိခဲ့ရင် သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုတွေရှိတယ်၊ Special promotion တွေရှိတယ်ဆိုတာ Website ပေါ်မှာတင်လိုက်တာနဲ. အနယ်အနယ်အရပ်ရပ်က သင့် Customer တွေ အလွယ်တကူသိရှိနိုင်ပါတယ်။
၄။ ပို၍ Accessible ဖြစ်ခြင်း။
သင့် Website ဟာ ၂၄နာရီ၊ ၇ ရက်၊ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အင်တာနက်ပေါ်ရှိနေတာဖြစ်လို့ သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်စားသူ မည်သူမဆို အလုပ်ပိတ်ရက် ရုံး/ဆိုင်ပိတ်ထားရင်တောင် အင်တာနက်မှာ အလွယ်တကူ လေ့လာကြည့်ရှု့လို့ရပါတယ်။
၅။ Website မှတစ်ဆင့် ဈေးကွက်ကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စေခြင်း။
အင်တာနက်ဈေးကွက်က ပုံမှန်ဈေးကွက်ထက်ပိုကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ တစ်မြို့ထည်း၊ တစ်နိုင်ငံတည်တင်မဟုတ်ပဲ နိုင်ငံတကာထိရောင်းချလို့ရပါတယ်။ ယခုခေတ်က ကားတွေ၊ အိမ်တွေတောင်အင်တာနက်ပေါ် ရောင်းနေဝယ်နေကြတဲ့ ခေတ်ဖြစ်နေပါပြီ။
၆။ Website သည် အကောင်းဆုံး Showcase တစ်ခုအဖြစ် အမြဲရှိနေခြင်း။
ဘာလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ် Website ဟာ သင့်စီးပွားရေးအတွက် အကောင်းဆုံး Showcase တစ်ခုပါ။ သင့် Company အကြောင်း ရှင်းပြတဲ့ Portfolio ၊ သင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ၊ Services တွေ ၊ ကုန်စည်အမျိုးအစားတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို Website ပေါ်မှာတစ်ခုချင်းစီ ချပြလို့ရတဲ့ Showcase တစ်ခုပါ။
၇။ Website အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အချိန်ကုန်သက်သာစေခြင်း။
သင့်လုပ်ငန်းအကြောင်း၊ သင့် ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းကို Customer တစ်ယောက်ချင်းစီကို မျက်နှာချင်းဆိုင် ရှင်းပြတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Email နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ရှင်းပြတာဟာ အချိန်ကုန်သလို လူလည်းပင်ပန်းပါတယ်။ Website မှာဆိုရင်သင့် Client သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာအတော်များများကို သိမ်းဆည်းပြသထားလို့ရ ပါတယ်။ FAQ တွေတင်ထားပေးလို့ရပါတယ်။ Video များဖြင့် Customer သိလိုသည်များကို Website မှာတင်ထားနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အချိန်တွေ မကုန်တော့ဘူးပေါ့။
သင့်လုပ်ငန်းအတွက် Website တစ်ခုလိုအပ်တာတော့ အမှန်ပါပဲ။ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် Website လိုအပ်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့နဲ့ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ လုပ်ငန်းအလိုက် လိုအပ်သော Website များကို သင့်စိတ်တိုင်းကျသည်အထိ ရေးဆွဲပေးပါသည်။
PRO-X တွင် Website များရေးဆွဲပေးခြင်းအပြင်၊ Point of Sale System၊ Restaurant POS၊ Studement Management System၊ Clinic Management System၊ Mobile Application များရေးသားခြင်း တို့ကိုလည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးနေ ပါသည်။ Customized Software များရေးသားခြင်းကိုလည်း လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ အသေးစိတ် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လျက် Customer များသို့ စိတ်တိုင်းကျသည် အထိ ဝန်ဆောင်မှု ပေးကာ ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
ကျွနု်ပ်တို့မှ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးဖို့ အမြဲအသင့်ရှိနေပါသည်။ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမှုများကိုလည်း အမြဲကြိုဆိုနေပါသည်။
📞 +95 9778915075, +95 9954915075
Web Application တွေရဲ့ အားသာချက်တွေကို သင်သိပြီးပြီလား❓